Yeedi 2 ngwakọ, in-omimi analysis of a smart robot agụụ Cleaner | Gam akporosis
Na mbụ anyị na-echetara gị nke ahụ ị nwere ike ịzụta ngwakọ Yeedi 2 a site na euro 299,99 na Amazon, ya mere ọ bụrụ na ị maraworị ya, ọ bụ ezigbo nhọrọ site na ụlọ ahịa a ma ama iji mee ka nkwa ya dị ukwuu.
6 Nkọwa: Yeedi 2 ngwakọ - Xiaomi Mi agụụ 1C
Ngwakọta ngwongwo nke Yeedi 2 a na-eketa ụdị kpochapụwo nke ụdị ngwaọrụ a na akwụkwọ akụkọ ole na ole. Ngwaọrụ ahụ bụ nke plastik matte maka akụkụ ya dị elu, ebe anyị ga-ahụ bọtịnụ "ike" ya na ihe ngosi ọkụ, igwefoto ga-ahụ maka ịdepụta mpaghara nhicha yana okpueze ahụ.
? Robot vacuum Cleaner na-amasị gị? Ọfọn, echela ọzọ, ugbu a Nwere ike ịzụta ya site na ịpị ebe a na ọnụahịa kacha mma.
Banyere mkpọtụ anyị nwere n’agbata 45 dB na 55 dB dabere na ike mmịpụta, ihe dị n'ime ụkpụrụ. N'ikpeazụ, anyị na-egosipụta nkwado zuru oke na Amazon's Alexa iji gwa gị ka ị malite ikpochapụ, otu ihe ahụ na Google Assistant. Na ule anyị olu onye enyemaka na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na o kwenyesiri gị ike, Cheta na ị nwere ike ịzụta ya na Amazon maka ihe na-erughị euro 300.
Banyere scrubbing, anyị nwere usoro nke disposable mops enwere ike ịzụta na Amazon site na otu usoro ịzụta dị ka ngwaọrụ ahụ na anyị ga-etinye n'ime mmiri mmiri maka nsonaazụ kachasị mma, yana kpochapụ ahịhịa kpochapụla ebe anyị anaghị enweta nsonaazụ kwesịrị ịrịba ama ọzọ. Anyị na-adụ ọdụ ịnwale ịlele ebe nyocha mbụ ọ bụkwa na ebe nwere ala seramiiki mmiri kachasị mmiri nwere ike ịmepụta akara mmiri. Isdị mmiri a anaghị akwado ya maka ogologo oge nke parquet ma ọ bụ parquet, nke mere na anyị na-ahọrọ mgbe niile maka nhọrọ nke mmiri kacha nta.
Nke a Yeedi ngwakọ 2 enyela anyị ahụmịhe "adịchaghị" n'okpuru 300 euro nke ahụ juwokwa anyị anya. Na ọkwa mmuta anyị nwere nsonaazụ dị mma, nke a ga-eji tụnyere ngwaahịa nwere ọnụahịa dị elu na nsoro abụọ na mmịpụta na ọchịchị obodo. Otu ihe ahụ na-eme na ngwa ahụ na-a drinksụ ihe ọ directlyụ directlyụ sitere na Roborock, otu n'ime ihe kachasị ezi na ahịa. Nsonaazụ njedebe na-erite uru site na ngalaba ndị a niile ma mee ka ọ bụrụ ngwaahịa amamihe dị n'etiti etiti.
Nkọwa: Yeedi 2 ngwakọ - Xiaomi Mi agụụ 1C
Ugbu a, anyị nwere obere nyocha nke anyị ga-eche ihu ụdị Yeedi 2 Hybrid na Xiaomi Mi Vacuum 1C yana data dị n'ụdị ndepụta dị mfe nghọta:
Xiaomi Mi agụụ 1C
Onwe ya 200 min 90 min
Ike mmiri 2500 PA 2500 PA
Igwefoto Igwefoto + LIDAR Igwefoto + Gyroscope
Containerjá akpa 430ml 600ml
Ichapu tank 240ml 200ml
Agụụ na sikrob SI SI
Noise 45/55 dB 55/65 dB
Homelọ Alexa / Google SI SI
Ike ike 3 4
Akụkụ ahịhịa 2 1
Ngosipụta teknụzụ Anya-SLAM -
Ahịa 229.99 € 229.99 €
Onye edemede: 900%
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Yeedi 2 ngwakọ, in-omimi analysis of a smart robot agụụ Cleaner
Ise egwuregwu kacha mma nke Dragon Ball maka gam akporo